Saldhigga Tareenka ee ugu quruxda badan adduunka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulSaldhigga ugu Weyn Caalamka ee ugu Wanaagsan
Saldhigga ugu Weyn Caalamka ee ugu Wanaagsan
20 / 10 / 2015 34 Istanbul, DUNIDA, GUUD, TURKEY
Jidadka Tareenka Ugu Weyn Caalamka ee Dunida: Tareenadu way ka badan yihiin kaliya gaadiidka loogu talagalay dhammaanba dhammaanteen. Waa jaceyl, nostalgic, macquul ah. Riwaayada jacaylka, waxay sidoo kale martigalisaa guusha murugo leh iyo aragti xeeladaysan; Filimad naxdin leh, dilal aan la garaneyn ayaa ah goobta dembiga. Tuubada waa martiqaad daacad ah oo ah magaalo aan joogsan, iyo riyadii dibi.
Tareenadu waa fiican yihiin. Waxay ka baxaysaa xasuusta in lagu xasuusto jir kasta oo ay martigeliso.
Waxaa sidoo kale jira xarumo ay marti u yihiin, buuxinta iyo faaruqinta martida martida ee gaadhigooda; waxay si buuxda u kala duwan yihiin emez aan ka ahayn joogsiga tareenka ee jimicsi qarniyaal ah. Kumbiyuutarada basaska sidoo kale maaha sida hudheelada, raaxeysiga. Xoogaa xasuusta dadku marwalba waxay ahaanayaan mid wakhti kooban ah.
Halkan waxaa ah farabadan xarumo qurux badan oo qurux badan.
1. Komsomolskaya, Moscow
Xarunta caanka ah waxaa lagu dhameeyay 1952 sanad kadib markii uu geeriyooday Stalin. Saldhigga ugu quruxda badan ee xarun weyn ee magaalada 9, Komsomolskaya waxaa lagu qurxiyey sheyga baroque-style.
2. Gare du Nord Sawiro Cunto, Paris
Gare du Nord waxa uu ku dhammaaday 1864. Sidaa darteed, waa mid ka mid ah saldhigyada tareenka ee ugu da'da weyn adduunka. In kasta oo taariikhda dhow, haddana waa mid ka mid ah saldhigyada ugu badan ee adduunka ah. Waa iska cad mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan. Dibedda xarunta ayaa si buuxda u qalabeeysa sawirada 23, mid kasta oo ka mid ah sawiradan waxay calaamad u tahay joogsiga tareenka.
3. Union Union, Washington, DC
Midowga, mid ka mid ah saldhigyada ugu caansan Maraykanka, waxaa loogu talagalay naqshad caan ah Daniel H. Burnham at 1907. Burnham wuxuu isticmaalay dahab, iyo sidoo kale marble iyo mahogany, kuwaas oo loo isticmaalay si ballaadhan dhismihiisa.
4. Estacion De Atocha Sawirada Cuntada, Madrid
Atocha waa mid ka mid ah saldhigyada ugu da'da weyn adduunka. Saldhiggii asalka ahaa, oo dab wax weyn ka soo gaaray 1851 oo ku dhawaad ​​gebi ahaanba burburay. 30 Saldhigga, oo dib loo furay sanad kadib, waa saldhigga ugu weyn Spain. Beerta kuleylka ee wadnaha 1992 ee ku xiran saldhigga waxaa lagu dhejiyaa xarunta dukaamada.
5. Sao Bento Raiway Station, Porto
Sao Bento, oo laga furay Porto, mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Portugal, ayaa lagu dhameeyay 1916. Sawirro ka buuxiyey gudaha gudaha dhismaha ayaa dhamaantood sameeyay joornaalka Jorge Colaço waxayna ahaayeen astaamaha taariikhda Portugal. Dhammaystirka ranjiyeynta waxay qaadatay sanadka sanadka 11.
6. Xarunta Dhexe ee Antwerpen, Antwerp / Belgium
Halyeeyga Hore ee Antwerpen waxaa lagu dhameeyay 1905. In ka badan labaatan dhagax iyo marble ayaa loo isticmaalay dhismaha Antwerpen, halkaas oo aad ka arki karto albaabka weyn. Antwerpen Sir, oo leh qiimo weyn oo leh nalka dabiiciga ah iyo nalalka habeenkii waqti kasta oo ka mid ah maalinta.
7. Sirkeci Tababare, Istanbul
Sirkeci, oo ah wadashaqeyn ka dhex jirta Faransiis iyo Abaalmarinta Austaxanka, waa mid ka mid ah saldhigyada ugu caansan adduunka. Dhismaha 1890 wuxuu ka mid ahaa dhismayaasha ugu quruxda badan dhismaha waqtigiisii. Idaacadda ayaa iftiimisay laydhka 300 iyo kuleylka qiiqa laga soo qaaday Austria.
8. Haydarpasa Station, Istanbul
Suurtagal ma noqon karto in laga hadlo saldhigyada tareenka ugu quruxda badan aduunka oo dhan iyo in aan lagu xusin Haydarpaşa. Waxaa dhisay dhisme Jarmal Otto Ritter iyo Helmut Conu oo ku yaala Haydarpasa, 1909. Mid ka mid ah tusaalayaasha guuleysiga ee Baroko ee dhismaha, Haydarpaşa wuxuu ahaa albaabka Anatolian ee Istanbul muddo sannado ah, oo ku wareegsan badda saddex dhinac, waxaana lagu salaamay gegida isku xira labada dhinac ee Istanbul. Nasiib daro maanta, Istanbul waxay marti u tahay martida martida ah ee ka timid Anatolia.
Qadka Baabuurta Badan ee Qeybta Kooban ee Caalamka iyo qurxinta 9
Australian Ambassador High Speed ​​Rail System in Turkey Model Beautiful Waayo Us
Xarumaha tareenka xawaaraha sare ee Ankara iyo Istanbul ayaa la qorsheynayaa in la kordhiyo 2013
Xarumaha Tareenadu waa inay ku yaalaan bartamaha magaalada
Saldhigyada tareenka Ruushka ee Ukraine
Hikayeli Xarunta Tababarka
Turkey ee Best Ski jiga (Photo Gallery)
Xarunta Tareenka ee Haydarpasa
Saldhig tareenka Sirkeci
Metrobus ayaa ku burburtay xerada Bosphorus Bridge 6 dhaawac ah